Saron’ireo Teny vahiny Maro Ny teny Nentim-paharazan’i Japana · Global Voices teny Malagasy
Saron'ireo Teny vahiny Maro Ny teny Nentim-paharazan'i Japana
Voadika ny 20 Jolay 2013 15:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, বাংলা, Italiano, Ελληνικά, فارسی, македонски, English
Lehilahy lehibe iray 71 taona no nametraka fitoriana tamin'ilay Haino aman-jery NHK any Japana noho ny fahasahiranan-tsainy nateraky ny fampiasàn-dry zareo teny vahiny diso tafahoatra. Tena very tanteraka izy raha resaka fandikan-teny, nefa dia ao amin'ny tanindrazany ihany.
Sary katakana avy amin'ilay mpampiasa flickr mroach.(CC BY SA.2.0)
Tezitra tamin'ny Televiziona io lehilahy lehibe io noho ny fampiasany teny nindramina izay toa mitovy fanonona amin'ny teny vahiny kanefa soratana amin'ny teny Japone katakana. Aminy dia andiana litera fotsiny ihany izany fa tsy misy dikany raha araky ny fototra ao amin'ny teny Japone. Ohatra amin'ireo fanoratana teny nindramina : “preview” (fanamarinana) dia nosoratana hoe “プレビュー” (vakiana hoe purebyu), “draft” (vakiraoka) dia soratana hoe “ドラフト” (vakiana hoe dorafuto). Ny tena tsy misy dikany amin'io lehilahy lehibe io dia ny fampiasana ny teny tahaka ny hoe “care”(fikarakarana) na ny “risk”(risi-po) any anaty fandaharana nefa misy fomba filazàna azy amin'ny teny Japone ireo, mihevitra izy fa manitsakitsaka ny zony hahazo vaovao sy ny zony hanana fiainana mahafinaritra ilay mpanolotra fandaharana.
Tsy eo amin'ireo olona antitra ihany no ahitàna ity olana fampiasàna teny vahiny ity fa eo amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny Biraon'ny Raharaha Ara-Kolotsaina ao Japana dia nahita fa [ja] manaratsy ny hatsaran'ny netim-paharazana Japone ny fitomboan'ny fampiasana teny vahiny, ary koa manimba ny fifandraisana eo amin'ny tanora sy ny olon-dehibe. Tamina fanadihadiana nataon'ny governemanta ny taona 2007 momba ny teny nindramina, no nahafantarana fa latsaky ny 10 % [ja] ny fahazahoana ny teny katakana toy ny “empowerment” (fandraisana andraikitra) sy ny “literacy” (fampianarana mamaky teny sy manoratra), kanefa mihamitombo ny fahazoana ireo teny vahiny amin'ny ankapobeny. Manoloana izany fampiasana mihoapapana be ny teny vahiny amin'ny an-davanandro izany, Kentaro Takahashi dia namoaka boky iray [ja] ny volana Septambra 2012 ahafahana manazava marina ny tena dikan'ireo katakana fampiasa matetika amin'ny teny Japone.
Katakana handikana ny teny vahiny amin'ny teny Japone. Sary avy amin'ilay mpampiasa flickr, WordRidden (CC BY 2.0)
Toshinao Sasaki, mpanao gazety iray nanoratra boky mikasika ny fanangonam-baovao amin'ny vanim-potoanan'ny tambajotra sosialy, dia sahiran-tsaina tamin'ny fampiasàna ny katakana mba hanazavàna ny momba ny bokiny [ja] :
Tsy nahita teny mety handikana ny hoe “curation” (fanangonam-baovao) amin'ny teny Japone mihitsy aho, ka dia najanoko tamin'izao fotsiny. Tena zava-tsarotra io resaka teny io. Hafahafa indraindray ny mandika teny vahiny amin'ny teny Japone nentim-paharazana.
Nilaza ny heviny mikasika ny teny vahiny ihany koa ilay “Anthropologiste” Ichiro Numazaki tao amin'ny Twitter :
Iza no mbola miteny hoe shukyu [fiteny taloha iantsoana ny baolina dakàna] hilazana ny baolina kitra amin'izao fotoana izao ? Tsaratsara kokoa ve ny manatsahatra ny fiteny hoe “supporters” (mpanohana) [amin'ny katakana] ary miantso azy ireo hoe “応援団” [fiteny taloha ilazana ireo namana mandrisika]? Hinoako fa tsia. Manohitra ny fampiasana teny vaovao hiantsoana zava-baovao ireo rehetra mpanakiana ny katakana. Fa tsy hoe ny katakana no tsy tiany.
Nisy fotoana nanomezana dika teny Japone ho an'ireo teny vahiny nampidirina tao Japana, ary nomena kanji (Fomba fanoratra Sinoa) efa misy sy hiragana (Fomba fanoratra Japone) mba ahafahana mampifandray ny dikany amin'izao fotoana. Ireo teny toy ny “freedom” (fahafahana) sy ny “democracy” (demokrasia) izay nampidirina ny taonjato faha-19, dia nadika tamin'ny teny Japone tamin'ny fampiasana ny kanji ka lasa hoe “自由“[ja] sy “民主主義“[ja]. Na dia mbola vaovao aza ireo teny ireo tamin'izany fotoana, dia mbola nisy dikany teo amin'ireo Japone satria ny kanji tsirairay avy dia manana ny dikany manokana ary raha atambatra dia ahazohana teny vaovao mazava tsara.
Ilay poeta, Kiyoe Kawazu indray dia mahatsapa fa ny fampiasana ny katakana amin'ny teny vahiny dia fihemorana eo amin'ny tontolon'ny teny araky ny fahafantarany azy :
Mampatahotra ahy ny hoe zavatra mazava tsara izao dia avilan'ny fampiasana teny nindramina, toy ny fiteny Tandrefana soratana amin'ny katakana na koa teny Sinoa soratana amin'ny kanji Japone. Tamin'ny vanim-potoana Meiji [1868-1912], nanome dikateny tamin'ny kanji foana ry zareo, kanefa ankehitriny dia tsy mampiasa afatsy katakana. Tsikelikely dia tafiditra an-tsain'ny vahoaka ireo fanazavàna manjavozavo, ka na dia zavatra mazava tsara aza dia lasa saro-takarina.
Nijery ny lafitsaran'ny fampiasana ireo teny nindramina i Ichiro Numazaki :
Nampiditra hevitra vaovao ireny teny nindramina ireny, tahaa ny hoe “sexual harrassment” (fanararaotana ara-nofo) sy ny hoe “DV”(domestic violence – herisetra ao an-tokantrano). Nahasarika ny sain'ny olona ireny satria mahomby ny katakana sy ireo litera ao anatiny amin'ny fampidirana hevitra vaovao. Tokony ho takatry ny vahoaka ny olana mba ahafahany mandray tsara ny katakana na ny litera.
Mpampiasa Twitter iray hafa @sumiyoshi_49 no naneho hevitra hoe mahalasa adala ireo tsy dia manan-tsaina ireny teny vahiny ireny amin'ny resaka andavanandro :
Heveriko fa tokony hisaina tsara isika amin'ny fampiasàna ny teny tahaka ny hoe “normalization” (fampanaraham-penitra) sy ny hoe “hate speech” (lahateny manevateva) [izay samy soratana amin'ny katakana toy ny teny nindramina], satria manilika ireo Japone tsotra ireny katakana ireny, sady tsy mandrisika azy ho liana amin'ny tena dikan'izany. Ireo Japone tsy mahafehy tsara ny teny anglisy izany dia tsy hahatakatra ny hevitra voasoratra amin'ny katakana mihitsy.
Ity lahatsoratra ity dia nadika niarahana tamin'ny fanampian'i Takashi Ohta, ary notsarain'i Sahar Habib Ghazi